Himalaya Dainik » फूड सेफ्टीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका ५ उपाय
फूड सेफ्टीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका ५ उपाय
कोरोना भाइरसका बिषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका तर्फबाट बिभिन्न जानकारी दिइएको छ । विशेष गरि सरसफाई र सुरक्षाका बिषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिशानिर्देश दिदै आएको छ ।
यसै क्रममा डब्लुएचओले फूड सेफ्टीका बिषयमा ५ टिप्सहरु दिएको छ ।
१. सफाईमा विशेष ध्यान
खाना पकाउँदा वा तयार पार्दा कुनै पनि खाद्य सामग्री छुनु भन्दा अगाडि हातलाई साबुन पानीले मज्जाले धुनुपर्दछ । खाना बनाउँदा प्रयोग हुने हरेक भाडा वा सतह मज्जाले धुनुपर्दछ वा स्यानिटाइज गर्नुपर्दछ । भान्सालाई कुनै पनि किराको प्रवेशबाट रोक्नु पर्दछ ।
रो-गको सं-क्रमण फैलाउने भा-इरस हात, फोहोर, पानी र जनावरका माध्यमबाट फैलने गर्दछ । यी भाइ-रस भाडाकुडा, भान्साको सतह र हातमा आउने गर्दछन् । त्यसैले यी सबैको नियमित सफाइ गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
२ं काँचो र पाकेको खान
काँचो माछामासु, तरकारी तथा अन्य खाद्य पदार्थलाई पाकेको खानाबाट टाढा राख्नु पर्दछ । साथै काँचो खाद्य पर्दाथ र पाकेको खाना एउटै भाडामा राख्नु हुदैन । यतिमात्र होइन काचो र पाकेको खाना काट्ने, पस्कने सामग्री समेत अलग पार्नु पर्दछ ।
काँचो भोजन, विशेषगरी माछामासुमा खत*रनाक सूक्ष्मजीव हुन सम्भावना हुन्छ । जसलाई पकाउँदा यो न-ष्ट भएर जान्छ । तर पाकिसकेको खाना काचो खानासंगै राख्दा सुक्ष्मजीव सर्न सक्छ र यसबाट रो-गको जोखि-म पनि हुनसक्छ ।
३. खाना मजाले पकाउनुहोस्
खानालाई मज्जाले पकाएर मात्र खानुहोस् । विशेषतः माछामासु तथा अण्डालाई ७० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापमानमा मज्जाले उमालेर मात्र खानुपर्दछ । माछामासु पकाउँदा मासु गुलाबि रंगमा पाक्नासाथ खानु हुदैन ।
खानालाई ७० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापमानमा पकाउँदा सम्पुर्ण की-टाणु म-रेर जाने गर्दछ । गुलाबि रंगमा पाकेको माछामासु राम्ररी पाकेको हुदैन तसर्थ यसलाई पुर्ण सफा गरी पाकेको देखिनेगरी पकाउनु पर्दछ ।
४. खानालाई सुरक्षित तापमानमा राख्नुहोस्
भान्साको तापमानमा मात्र २ घण्टाभन्दा बढि समयसम्म खानालाई राख्नु हुदैन । यदि पाक्नासाथ खान अनुकुल छैन भने उचित तापमान बनाएर फ्रिजमा राख्न सकिन्छ । तर खाना खानुअघि वा पस्कनु अघि फेरी खानालाई न्युनतम ६० डिग्री सेल्सियस तापमानमा तताउनु पर्दछ ।
भान्साको सामान्य तापमानमा भाइरस तिव्र रुपमा फैलने गर्दछ । ५ डिग्रीभन्दा कम र ६० डिग्री भन्दा बढि तापमानमा अधिकाशं जी-वाणु म-र्ने गर्दछ । तर केहि सीमित जीवाणुको हकमा भने यो लागु नहुन सक्छ ।
५. सफा पानीको प्रयोग गर्नुहोस्
पिउने पानी र खाना बनाउने पानी हमेशा सफा हुनु पर्दछ । सकेसम्म पिउन उमालेको पानी प्रयोग गर्नु लाभदायक हुन्छ । तरकारी साथै फलफुल पनि सफा पानीले मज्जाले धुनुपर्दछ । ताजा र पौष्टिक खाद्य पदार्थ मात्र खानुपर्दछ । म्याद नाघेका खाद्य पर्दाथ खानु हुदैन ।
काँचो सामग्री यहाँसम्म कि पानी र बरफमा पनि खत-रनाक सूक्ष्मजीव हुने गर्दछ । त्यसैले पिउने वा खाना पकाउने पानी सफा हुनुपर्दछ । म्याद भएका खाद्यपर्दाथ मात्र खानु स्वास्थ्यका लागी अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । एजेन्सी